Lisitry ny fikojakojana fikolokoloana WordPress: ny lisitry ny toro-hevitra, fitaovana ary fomba fanao tsara indrindra | Martech Zone
Zoma, Jolay 20, 2018 Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Douglas Karr
Androany vao nihaona tamin'ny mpanjifanay roa momba ny fametrahana WordPress azy ireo. Mpivarotra-agnostika tsara tarehy aho momba ny rafitra fitantanana atiny. Ny lazan'ny WordPress amin'ny ankapobeny dia tena nanampy azy satria ny ankamaroan'ny antoko fahatelo dia hiaraka aminy, ary ny lohahevitra sy ny tontolo iainana plugin dia tsara araka izay azonao atao. Betsaka ny novolavolako WordPress plugins, ny tenako, hanampy ny mpanjifanay sy hanohana ny tontolo iainana.
Na izany aza, tsy hoe tsy misy ny olany na izany aza. Satria malaza be izany rafitra fitantanana atiny, WordPress lasibatra voalohany amin'ny hackers sy spammers na aiza na aiza. Ary, noho ny fanamorana ny fampiasana azy, dia mora ny manangana fametrahana matevina izay mahatonga ny tranokala hiforitra. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny kritika ankehitriny ny fahombiazan'ny asa sy ny fanatsarana ny fikarohana, tsy dia tsara ho an'ny tranonkala maro izany.
Izany dia nilaza fa tsara ny fisian'ny olona toa ny BigrockCoupon izay namorona infografika feno mba hanampiana ireo mpampiditra WordPress. Ny infografika, Lisitry ny fikojakojana tranokala WordPress, dia manana torohevitra sy fomba fanao tena ilaina mihoatra ny 50 ho an'ny tompona tranokala handaharana ao anatin'ny tolotra ataon'izy ireo hisorohana olana.
Ity ny lisitry ny fikolokoloana WordPress
Ny infographic dia misy singa maromaro kokoa, fa raha manarona ireo ianao dia alohan'ireo mpifaninana aminao! Izaho dia mitazona lisitr'ireo plugins WordPress tsara indrindra fa efa nandramana sy nampihatra izahay… aza hadino ny manamarika izany!
Ampidino ny Database WordPress anao - Alohan'ny hanaovanao na inona na inona amin'ny WordPress dia alao antoka fa manana backup voalohany ianao izay voatazona ivelan'ny toerana. Izany no antony ampiasantsika ny WordPress Managed Hosting miaraka Flywheel. Izy ireo dia manana backup automatique sy manual amin'ny famerenana amin'ny laoniny iray. Tsy mila manamboatra na mamela na inona na inona mihitsy izahay… teo foana ireo!
Omeo fanamarinana ny WordPress - Ampandehano ny tranokalanao Fanamarinana WP ary hahita zavatra iray taonina ianao hanadiovana ny tranokalanao. Tsy ny olana rehetra no misy akony mafy aminao - fa manisa kely ihany ny fanatsarana rehetra!
Fanaraha-maso ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala - mampiasa Fampahalalana GoogleSpeed ​​Google hamakafaka pejy momba ny olana hafainganam-pandeha.
Zahao ireo rohy tapaka - Rehefa nampiasa fitaovana an-tserasera maromaro aho dia mbola tsy nahita zavatra tsara noho ny Spider SEO Froging Frog ho an'ny tranonkala mandady amin'ny rohy tapaka. Ny infographic dia manoro hevitra ny hanampy plugin iray hanaovana izany, saingy mety hanimba ny zava-bitanao izany ary hahatonga anao hanana olana kely amin'ny mpampiantrano anao.
301 Redirect ho an'ny rohy tapaka - Ivelan'ny mpanjifanay nampiantrano WPEngine, izay manana ny fitantanana ny fanodinana azy manokana, ny mpanjifanay rehetra dia mitantana ny Plugin redirection.
Amboary ny WordPress, ny lohahevitra ary ny plugins amin'ny kinova farany - Ilaina fotsiny izany ankehitriny raha ny olana ara-piarovana no jerena. Raha iray amin'ireo olona manahy ianao fa ny fanavaozana ny plugin dia mety hanapotika ny tranokalanao, azonao atao ny mitady plugin vaovao. Ny mpandrindra rehetra dia manana fotoana hijerena ny lohahevitra sy ny plugins amin'ny famoahana WordPress ho avy.
Fafao ny hevitry ny spam - Tena tiako ny mahazo Jetpack ary ny fisoratana anarana amin'i Akismet hanampy an'io.
Fafao ireo lohahevitra, sary ary sary mihetsika tsy ampiasaina - Ny plugins voahodina dia manampy kaody fanampiny amin'ny tranokalanao rehefa mamoaka. Io overhead io dia afaka mampiadana ny tranokalanao ka ny fomba fanao tsara indrindra dia ny manao tsy misy.
Clear kinova sy fako - Arakaraka ny maha kely ny data-nao no haingana kokoa ny fangatahana hisintona atiny. Aza hadino ny manadio pejy sy mandefa kinova ary koa ny pejy voafafa sy ny hafatra matetika.
Fanaraha-maso ny fiarovana ny tranokala - Flywheel Tsy mpankafy plugins fiarovana izahay, azoko atao ny mandeha miaraka amin'ny mpampiantrano tsara. Ny ekipan'izy ireo dia mijanona eo ambonin'ny fiarovana tsy misy fampisehoana plugin.
Tabilao Optimize Database - Raha toa ka nametraka lohahevitra sy plugins vitsivitsy ianao, ny ankamaroan'izy ireo dia mamela ny angon-drakitra ao aorianao. Izy io dia afaka manampy ny olan'ny fampisehoana ary mampitombo ny fotoana fandefasana satria ny data tsy ampiasaina dia mety mbola hadinina sy hampidirina na hita izany na tsia. Ny plugin voatanisa dia efa antitra, azafady Clean Database cleaner.
Fanatsarana ny sary - Ny sary tsy voafehy dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny zava-bitan'ny tranokalanao. Tianay Kraken ary ny plugin WordPress ho an'ny famoretana ny sarinay.
Zahao ny fiasan'ny mailaka fidirana sy ny endrika fifandraisana - hery misintona Forms Nahazo fitarainana avy amina mpanjifa ho avy izahay fa nisy ny endrik'ilay tranonkala natombok'izy ireo saingy tsy nahazo fitarihana. Rehefa nozahanay ny tranokala, dia hitanay fa endrika dummy ireo takelaka ireo ary izay mety nifandray tamin'ny orinasa no nanolotra azy fa tsy nandeha n'aiza n'aiza. Maharary! Ampiasainay amin'ny mpanjifa REHETRA izany!
Avereno jerena ny Google Analytics - Mahagaga hatrany ny mpanjifanay fa vitsy ny pejin'izy ireo no voatanisa amin'ny motera fikarohana na novakian'ireo mpitsidika aza. Mankasitraka indrindra izahay Fikorianan'ny mpampiasa, ilay tatitra izay mampiseho ny fitetezan'ny olona ny tranokalanao.
Zahao ny Console Search Google - Mampiseho anao izay tena tonga tao amin'ny tranokalanao ihany ny Analytics. Ahoana ny amin'ireo olona nijery ny tranokalanao tamin'ny valin'ny motera fikarohana? Eny, Webmasters no fitaovana hahitana ny fomba fahitan'i Google ny tranokalanao momba ny fahasalamana, fitoniana ary amin'ny valin'ny fikarohana. Araho maso ny angona momba ny lesoka ary andramo ny manitsy azy ireo rehefa mipoitra izy ireo.
Hanavao ny atiny - Tamin'ny fanoratana an'ity lahatsoratra ity dia nanavao lahatsoratra farafahakeliny roapolo farafahakeliny izay notondroiko aho mba hahazoana antoka fa voatazona vaovao izy ireo. Ho gaga ianao amin'ny olana eo amin'ny tranokalanao izay miseho - toy ny rohy mankamin'ny tranonkala ivelany tsy misy intsony, sary mety manana olana, ary atiny efa lany andro fotsiny. Ataovy madio hatrany ny atiny ka zaraina, voatanisa ary misy lanja ho an'ny mpihaino anao izany.
Hevitra famerenana lohateny sy Meta - - Ny fomba tsara hanatsarana ny tranokalanao ho an'ny motera fikarohana dia ny fametrahana sy ny fikirakirana ireo plugins. Ny lohateny dia hanampy ny pejinao ho voasokitra araka ny tokony ho izy amin'ny atiny izay aharihary sy ny famaritana azy ireo ary hitaona ny mpampiasa motera hikaroka ny vokatry ny lisitra nataonao.
Ity ny sary feno miaraka amin'ny torohevitra sy fomba fampiasa 50 mahery BigrockCoupon!
Tags: 301 Redirect ho an'ny rohy tapakaAmpidino ny Database WordPress anaoOvao ny teny miafinaoZahao ny Adsense Ads amin'ny tranokalanaoZahao ireo rohy AffiliateHamarino ny fidirana an-tsehatra amin'ny mailaka sy ny endrika fifandraisanaZahao ireo rohy tapakaZahao ireo fitaovana Google Console (Webmaster)Zahao ireo loharano ampiasainaZahao ireo rohy Sidebar sy BlogrollZahao ireo rohy media sosialyZahao ny statistikan'ny mpampiantranoZahao ny fiarovana ny tranokalaZahao ireo rohy fampidinana anaoZahao ny sakafo avy amin'ny tranokalanaoZahao ny fitetezana ny tranokalanaoHamafa ny fakoFarito ny elanelam-potoana hitsimbinana ny fiaraFafao ny hevitra momba ny spamFafao ny Plugins tsy ilainaFafao ireo lohahevitra tsy tianaAtsaharo ny fanavaozana WordPress mandeha ho azyAtsaharo ny Mode DebugAtsaharo ny Trackbacks sy PingbacksSary fanatsaranaAmpitomboy ny fetra fahatsiarovanascanner malwareManadio ireo rakitra mediaTabilao Optimize DatabaseFikojakojana ny famoahana lahatsoratraRefresh Header Banner sy Site ImagesEsory ny drafitra sy ny fanitsianaEsory ireo mpandrindra tranokala tsy miasaHanavao ny fampiantranoana sy ny sehatraMamaly ny hevitraAvereno jerena ny Google AnalyticsAvereno jerena ny lohateny Meta sy ny famaritana MetaAvereno jerena ny SEO ao amin'ny pejyAvereno jerena ny pejinao momba anayMihazakazaha tranokala amin'ny alàlan'ny fanamarinana WPRaiso ny backup isan'androFitsapana ny fizahan-toetra ny Browser sy ny fitaovanaHanavao ny datin'ny zon'ny mpamorona ao amin'ny footer-naoHanavao ny atinyHanavao ny Plugins WordPress anaoAmpivoary ny lohahevitry ny WordPress anaoHanavao ny Widgets WordPress anaoAmboary ny WordPress amin'ny kinova faranyManamarina ny tranokalanaoFanaraha-maso ny fiarovana ny tranokalaFanaraha-maso ny hafainganam-pandehan'ny tranonkalafanamarinana wp
Torohevitra Ecommerce 7 hamoronana atiny hiova finoana